Fanovana ny baiko ao amin'ny Hotely Puerto Rico sy ny Fikambanan'ny fizahantany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanovana ny baiko ao amin'ny Hotely Puerto Rico sy ny Fikambanan'ny fizahantany
Ny Fikambanan'ny Hotely sy ny fizahan-tany any Puerto Rico dia nifidy an'i Pablo Torres, mpitantana jeneralin'ny Hotely Caribe Hilton, ho filohan'ny filankevi-pitantanana vaovao. I Torres no hitarika sy hitarika ny ezaky ny Fikambanana mandritra ny roa taona ho avy. Ity fanovana baiko ity dia natao tamin'ny fankalazana ny Andron'ny fizahan-tany tao amin'ny Hotely Intercontinental Isla Verde.
"Miady amin'ny fiadidian'ny Filankevi-pitantanan'ny PRHTA amin'ny heriko be aho, ny fomba fijery tsara ary ny faniriana lalina handray anjara amin'ny hetsika fizahan-tany sy fampandrosoana ara-toekarena ho an'i Puerto Rico," hoy i Torres. "Hiara-hiasa amin'ireo sehatra ho an'ny daholobe izahay handrosoana ny fandaharam-potoana hanasoavana ny fizahantany eto amin'ny Nosy ary hamelombelona ny drafi-paikadin'ny Fikambanana hanohizana hanomezana lanja ireo mpikambana sy mpiara-miombon'antoka aminay."
Toy izany koa, nandritra ny sakafo atoandro nataon'ny filankevi-pitantanan'ny filoha nivoaka, i Miguel Vega dia nandany ny vaton'ny filoha taorian'ny nanehoany ny zava-bita sy ny zava-bitan'ny Fikambanana nandritra ny fotoana nitondrany ny PRHTA.
"Mora ny manasongadina izay mahasoa ho an'ny indostria sy izay efa vitantsika nandritra izay taona maro izay, ho fanampin'ny fiaraha-miasa niarahanay niasa mba hahasoa ny fizahantany. Izahay no nialoha lalana tamin'ny resaka fananganana orinasam-pivarotana ho any Puerto Rico. Nisy ny fanoherana ilay maodely, saingy niara-niasa tamin'ny fikambanan'ny governemanta ny Fikambanana mba hampandrosoana ity tetikasa ity ary tamin'ny volana Jolay lasa teo dia nanatri-maso ny fananganana ity fikambanana ity izahay.
Ny famoronana ny Discover Puerto Rico dia dingana lehibe amin'ny varotra sy fampiroboroboana an'i Puerto Rico. Mbola manao fanitsiana ihany izahay ary mamindra lafin-javatra sasany, saingy eo an-dàlana hahatratra fikambanana tsy politika izay tanjon'izy ireo voalohany dia ny fampiroboroboana mahomby sy ny fivarotana tsy tapaka an'i Puerto Rico ho toerana iray ary hiarovana ny tombotsoan'ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny Nosy, ”Hoy ​​ny fanazavan'ilay mpanatanteraka nandritra ny hafany.
Nohazavainy koa fa amin'ny maha fikambanana azy, ny Fikambanana dia mpilalao fototra handresy ny fiezahana hametraka ho ara-dalàna ny loteria amin'ny horonantsary sy ny fanaratsiana azy. Hatramin'ny niandohan'ny fanandramana mpanao lalàna, hatramin'ny alàlan'ny fanatrehana ny fitsarana hampiatoana ireo fanandramana, ny Fikambanana dia mavitrika amin'ny fisorohana io fahasimbana mahatsiravina io eo amin'ny indostria. Nambarany ihany koa fa tsy hampidina ny mpiambina azy ny Fikambanana ary hiambina hatrany amin'ity raharaha ity.
“Ny trano filokana misy anay dia ampahany lehibe sy lehibe amin'ny lahasa fizahan-tany eto amin'ny Nosy. Nandritra ny taom-piasana 2017-2018, ny casino dia nampiditra vola mitentina $ 275 tapitrisa amin'ny Treasury hivarotana sy hampiroborobo an'i Puerto Rico, amin'ny Oniversiten'i Puerto Rico, ary amin'ny General Fund. Zava-bita fa tao anatin'ny andrana roa ambin'ny folo taona lasa izay dia tsy nanjary zava-misy ireo lalàna ireo. Hanohy hiaro ny indostrian'ny hotely casino izahay, "hoy izy nanambara.
Nandritra io fiaraha-misakafo io dia nandray anjara tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Miguel Vega momba ny tombotsoan'ny fikambanana, ny fiaraha-miasa isam-paritra ary ny fahafahan'ny indostria i Frank Comito, tale jeneralin'ny Caribbean Hotel and Association Association (CHTA), miaraka amin'ireo lohahevitra hafa momba ny fomba fanao tsara indrindra hahasoa ny fizahantany. Ho fanampin'izay, nanazava ny marika One Caribbean sy ny fanentanana The Rhythm Never Stops izy, valin'ny fifanarahana fiaraha-miasa teo amin'ny CHTA sy ny Caribbean Tourism Organization (CTO). Ny hetsika dia natrehana tsara ary nahitana singa fanabeazana miaraka amin'ny seminera marobe, fampirantiana ary B2B miaraka amin'ny fanendrena izay niafara tamin'ny koktail tambajotran'ireo mpikambana PRHTA sy mpanatrika.
Etazonia dia mila manova politika fiarovana fiarovana mampidi-doza tadiaviny
Transavia France hanatsara ny tolotra frantsay an'i Budapest